Somalia: Warkii Dalka | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
> News, SOMALI NEWS, TFG Somalia	> Somalia: Warkii Dalka	Somalia: Warkii Dalka
Laaska News	Laaska News July 2,2011
HALKANI WAA RADIO MUQDISHO – WARKII DALKA
Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay Konfurta Sudan
R/wasaaraha Soomaaliya oo booqday furimaha dagaalka
Madaxweynaha Yemen oo Madaxweyne Shariif ugu hambalyeeyay maalinta Xorriyadda
Xaflado lagu maamuusayay 1da Luuliyo oo ka dhacay London
Mareykanka Oo Raashin Ugu Deeqay Abaaraha Soomaaliya
Ganacsade Soomaali ah ayaa lagu dilay Konfurta dalka Sudan, laba kalena wey ku dhaawacmeen kadib markii ay weerar ku qaadeen kooxo hubeeysan.
C/qani C/llaahi oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Jubba ee caasimadda konfurta dalka Sudan oo la hadlayay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ninka dhintay iyo Labada dhaawacantay, gaari ay wateen uu ku sugnaa bar kontorool, kadibna ay kooxo mindiyo ku hubeesani soo weerareen sidaana uu ku geeriyooday ninkaasi ganacsadaha ahaa, halka dhaawaca labada kalena goobtaasi laga soo qaaday.
Isagoo hadalkiisa sii wata C/qani ayuu intaa ku daray in aan la garaneyn sababta rasmiga ah ee ka danbeeysa dilka raggaasi, isagoo tilmaamay in ninka geeriyooday uu watay Baasaboor Keenyaati ah, isla markaana lagu wareejiyay Safaaradda Kenya ay ku leedahay Dalkaasi.
Dilkani ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaali farabadan ay ku ganacsato dalkaasi oo dhawaan ka go’ay Sudan.
R/wasaaraha Soomaaliya C/weli Maxamed Cali ayaa maanta booqday aagaga hore ee dagaalka isagoo ciidamada Qalabka sida ugu hambalyeeyay guulaha wax ku oolka ah oo ay ka gaareen howlgallada ay ka wadaan magaalada Muqdisho.
R/wasaaruhu waxa uu socod dheer ku soo maray waddada wadnaha oo ay ku suganyihiin Ciidamada XDS oo kaashanaya kuwa Amism, gaar ahaan Masjidka Sheekh Biya maaloow, isgoyska Bakaaraha, kan Kaas balbalaaro Hotel Hodan African Village iyo Tarabuunka halkaas oo uu R/wasaaruhu warbixin kaga dhageeystay saraakiisha cidanka ee ku sugan aagagaasi.
Waxaana R/wasaaraha oo ay la socdeen xubno ay ka mid ahaayeen wasiirka Gaashaandhigga C/xakiin Max’uud Xaaji Fiqi, wasiir ku xigeenka Warfaafinta Max’ed Cabdule Geeseey, Taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo abaanduulaha Ciidanka ayaa waxa ay sidoo kale booqdeey xaruntii wasaaradda gaashaandhigga oo ay salaam kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada Xoogga iyo kuwa Amisom.
Wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadga Soomaaliya C/xakiin Max’uud Xaaji Fiqi oo goobtasi saaxafadda kula hadlay ayaa sheegay in ciidanku ay goobahaasi Amnigooda xaqiijiyeen hadafkooduna uu intaa ka fogyahay, lana sii wadi doono howlgalka dalka lagu xuraynaayo.
R/wasaaraha Soomaaliye mudane Cabdi wali Max’ed Cali Gaas oo isna gebagebadii halkaasi saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in maanta oo ah maalintii labaad ee xuriyadda uu soo booqdo ciidanka geesiyaasha ah ee dagaalka kula jira Al shabaab, waxaana uu carrabka ku adkeeyay in howlgalku aanu hakan doonin inta dalka amnigiisa laga xaqiijinaayo.
Waa markii ugu horeeysay ee R/wasaare C/weli uu booqdo ciidamada Qalabka sida ee ku jira jiidda hore ee dagaalka, tan iyo markii dhawaan loo magacaabay xilkaasi.
Madaxweynaha Dalka Yemen Cali Cabdalla Salax ayaa dhiggiisa Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed u soo diray Hambalyo ku aaddan Munaasabadda xorriyadda dalka Soomaaliya.
Sida ay qortay wakaaladda wararka dalka Yemen ee Saba Madaxweyne Cali Cabdalla Saalax ayaa dhambaal hambalyo ah u soo diray Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo Madaxweynaha iyo Shacbiga Soomaaliyeedba ugu hambalyeeyay Munaasabadaha maalmaha ay gobollada Soomaaliya ka xoroobeen gumeeystayaashii reer Yurub.
Madaxweynaha dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa u rajeeyey Shacbiga Soomaaliyeed in sanadkan sanadka xiga ay ku gaaraan Nabad, baraare iyo Barwaaqo Allena uu dhibaatada ka dulqaado.
Xaflado Balaaran oo lagu maamuusayey sanadguuradii 51aad ee kasoo wareegatay markii ay gobolada Koonfureed xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga islamarkaana ay midoobeen gobolada Koonfur iyo Waqooyi ayaa xalay ka dhacay magaalada London ee dalka Britain ayadoo xafladahaasina uu R/wasaaraha Soomaaliya Qadka Taleefonka uga qeybgalay.
Xafladahani oo ilaa 2 xafladood ahaa islamarkaana ay kasoo wada qeyb galeen intabadan Soomaalida ku nool dalka Britain ayaa ka kala dhacday Galbeedka iyo waqooyiga magaalada London waxaana ka qeyb galay masuuliyiin ka socotay Dowlada Soomaaliya oo isugu jira Wasiiro iyo Xildhibaano iyo R/wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo.
R/wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo oo xafladahaasi qudbado isku mid ah oo uu Jaaliyadaha kaga qanciyey sida uu xafiiska kaga tegay ka jeediyey waxaana uu ugu dambeyntii ka codsaday Qurbo joogta Soomaaliyeed in si isku duubni ah ay ula shaqeeyaan Xukuumadda uu R/wasaaraha ka yahay mudane C/weli Maxamed Cali.
R/wasaaraha Soomaaliya Mudane C/weli Maxamed Cali oo xafladahaasi kaga qeyb galay qadka Taleefoonka uga qeyb galay ayaa waxa uu ugu horeyntii Jaaliyadaha ku amaanay sida ay Soomaalinimada u muujinayaan waxaana uu ka codsaday inay ka qeyb qaataan sidii dhibaatooyinka dalka ka taagan wax looga qaban lahaa gaar ahaan dhibaatada Soomaaliya haysata oo sabab u ah laba arimood kuwaasi oo kala ah Abaar iyo Colaad.
Iyada oo laga jawaabayo abaaraha ku dhuftay wadamada geeska Afrika ayey dowlada mareykanka oo soomareysa xafiiska raashinka nabad darteed ee haya’adda gargaarka mareykanka ee USAID ayaa waxa ay magaalada Washinton ku saxiixday heshiis ay ku bixineyso ku dhowaad 19000 metric ton oo ah raashin gargaar ah, laguna wareejiyay hay’ada cuntada aduunka ee WFP ee qaabilsan howlaha gargaarka Soomaaliya, isla markaana raashinkaan ayaa waxa uu gaaray qaar ka mid ah bakhaarrada ay hay’addu gobolka ku leedahay, si loo hubiyo in si degdeg ah lagu gaarsiiyo haweenka iyo carruurta soomaaliya.
Madaxa howlaha hay’adda USAID ee bariga Afrika Larry Meserve oo magaalada Nairobi ka hadlayay ayaa yiri ”Deeqadani waxa ay wax badan wax ka tari doontaa baahida malaayiin soomaali ah oo ah kuwa ay dhibaateeyeen masiibooyinka dabiiciga ah,sidoo kale tani waa farriin ka socoto xukuumadda mareykanka kuna socota dadka soomaaliyeed, taas oo aan ku barbar taaganahay, joogteyna doono in aan ka caawinno sidii loo qafiifi lahaa dhibaatooyinka la soo darsaday dadka Soomaaliyeed”.
Deeqdaan oo qiimaheedu gaarayo 24.5 milyan ayaa waxa ay dhameystir u tahay 14,5milayn oo doollarka mareykanka ah oo horraantii sanadkaan si kaash ah ay USAID ugu wareejisay hay’adda cunnada aduunka ee WFP qeybteeda Soomaaliya si loogu taageero soo daabulidda deeq raashin ah oo ay ku deeqday xukuumadda Brazil oo gaareysa 65000 oo mitirik tan. xukuumada Mareykanku waxa ay dhanka bia’aadanimada Soomaaliya ku taageertay sanadkaan 2011 dhaqaale gaaraya 43 miyan oo doollarka mareykanka ah.
USAID waxa ay soomaaliya ka caawisaa dhanka caafimaadka, waxbarashada, dimuqaraadiyadda iyo barnaamijyada lagu hormarinayo kobcinta dhaqaalaha, sidoo kale dowladda mareykanku waxa ay caawin siisaa ku dhowaad 350 kun oo qaxooti soomaaliyeed ah oo ku sugan dalka Kenya, oo ay ka caawiso dhinacyada raashinka iyo waxbarashada.
Tags: Mogadishu, Muqdisho, News, Soomaaliya, Warkii Dalka